Ukuxilongwa kwe-Neuropsychological kanye nokuhlolwa kokwelashwa kwenkulumo (iminyaka yokukhula) | Ukuqeqeshwa kwengqondo
Ukuxilongwa kwe-Neuropsychological diagnostic kanye nokuhlola ukwelashwa kwenkulumo (iminyaka yokukhula)
Yenzelwe bani: Izingane nentsha enobunzima besikole
Kuthatha isikhathi esingakanani: Izinsuku ezingama-2-3 cishe
Kubiza malini: 384 €
Iphela kanjani: Umbiko wokugcina kanye nokuxilongwa okungenzeka (i-DSA)
Lapho ukuhlolwa kwenzeka khona: Nge-Ugo Bassi, 10 (Bologna)
Ungaxhumana kanjani nathi: 392 015 3949
Lolu hlobo lwendlela lufanele ikakhulukazi izinhlobo eziningi zezimo. Isibonelo, lapho umuntu enenkinga yokuhlala egxile, ekhanda ulwazi nezinqubo (imibhalo ezofundwa, amatafula, izinqubo zokubala ...), ukuveza imiqondo, ukufunda kahle nokuqonda imininingwane ebhaliwe neyomlomo.
Kwezinye izimo, ukungabaza kuthinta ukuthi kungenzeka ukuthi ingane noma umuntu omusha unamakhono aphakeme kakhulu kunokujwayelekile nokuthi, ngenxa yalokho, angadinga imfundiso eqondene naye.
Ilusizo ikakhulukazi lapho kusolwa ezinye zalezi zimo:
dyslexia (izinkinga zokufunda)
dysorthography (izinkinga zesipelingi)
dyscalculia (izinkinga zokubala)
dysgraphia (Izinkinga ezikhiqiza ukubhala okuhle)
ADHD (ukunakwa nezinkinga zokuphoqelela)
I-Plusdotation (izinga lengqondo liphakeme kakhulu kunokujwayelekile)
Ingxoxo ye-Anamnestic. Kungumzuzu wokucabanga okuhlose ukuqoqa imininingwane efanele ngomlando wezempilo wesiguli. Lesi sigaba sisiza ekuboneni inkinga okungenzeka ngayo futhi sinikeza isifundo sokuqala sokusetha isigaba sokuhlola.
Ukuhlola nohlaka lokuxilonga. Ngesikhathi sokuhlolwa, ingane (noma umuntu omusha) uzobekwa ezivivinyweni ezithile ezinenhloso ephelele yokuphenya ukusebenza nokusebenza kwengqondo ekufundeni (ngokwesibonelo, izinga lobuhlakani, amakhono okubheka, inkumbulo, ulimi, ukutholwa kokufunda, ukubhala nokubala).
Ukuhlelwa kombiko nokubuya kwengxoxo. Ekupheleni kwenqubo yokuxilonga, kuzokwethulwa umbiko ozobeka ngamafuphi lokho okuvela ezigabeni ezedlule. Iziphakamiso zokungenelela zizobikwa nazo. Lo mbiko uzokwethulwa futhi uchazelwe abazali ngenkathi kuqhubeka ingxoxo, echaza iziphetho ezifinyelelwe kanye neziphakamiso zokungenelela okulandelayo.
Yini engenziwa ngokulandelayo?
Ngokusekelwe kulokho okuqhamuka kuhlolo, izindlela ezahlukene zingaqaliswa:
Uma kwenzeka inkinga yokufunda ethize, ngenxa ye Umthetho we-170 / 2010, isikole kuzodingeka ukuthi sikhiqize idokhumenti elibizwa nge-Personalised Didactic Plan (PDP), lapho azokhombisa khona amathuluzi wokunxenxa nokusabalalisa kuzodingeka awasebenzise ukwenza ngokwezifiso ukufundisa ngezindlela zokufunda zezingane / zomfana (bheka futhi: ukuxilongwa kwe-DSA: okufanele ukwenze ngokulandelayo?).
Endabeni yezinye izici, njengobunzima bokunaka, ubunzima bememori noma izinga eliphakeme kakhulu lokuqonda, kuhlale kunokwenzeka ukwenza uhlelo lokufundisa olwenziwe ngezifiso ngenxa yesekhula yongqongqoshe I-BES (Izidingo Ezikhethekile Zemfundo).
Ngaphezu kwalokho, imihlangano ye inkulumo Ukwelashwa ukwenza ngcono izici ezihlobene nolimi noma ukufunda (ukufunda, ukubhala nokubala), izifundo ze-neuropsychology ukuthuthukisa ukunakwa namakhono okukhumbula ngekhanda kanye nezifundo zokuqeqesha abazali ukuthola amasu afanele wokulawula noma yiziphi izinkinga zokuziphatha kwengane.